Haisoratra | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Topic: boky sy gazety
Elena Blaginina, izay tantaram-piainany mifamatotra akaiky amin'ny tontolon'ny fahazazany, poeta ary mpandika teny rosiana malaza. Tanora maherin'ny iray no nihalehibe tamin'ny tononkalo tsara fanahy sy tso-po an'ny mpanoratra, mazava ny lohahevitry ny sanganasany ...
Ny tononkalo "Ala amin'ny fararano" - nanoratra sangan'asa kely i Tvardovsky
Ilay poeta rosiana mahatalanjona A.T. Tvardovsky dia nahavita asa tsara be dia be. Avy amin'ny sarambabem-bahoaka izy dia afaka nanao ny asany, toa an'i Sergei Yesenin, hampita ny hakanton'ny rosiana rehetra amin'ny fahatsorana tokana ...
"The Adventures of Captain Vrungel": famintinana. "The Adventures of Captain Vrungel" amin'ny toko
Tantara mampihomehy momba ny dia mahafinaritra nataon'ny kapiteny Vrungel no noforonin'ny mpanoratra sovietika Andrei Sergeevich Nekrasov. Ny tantara dia misy toko roa amby roapolo. Misy fampahalalana mahaliana ao amin'izy ireo, mitantara ny zava-niainan'ny tantsambo za-draharaha iray. Mpampianatra ...
Borodino. Lermontov M.Yu. Fanadihadiana momba ny tononkalo
Nandritra ny fotoana fohy niainany, Mikhail Lermontov dia nanoratra sanganasa mamirapiratra marobe izay gaga amin'ny hakanton'ny syllable sy ny halalin'ny dikany. Zavatra roa no nankafizan'ny poeta foana: ny hatsaran'ny natiora sy ny fahatsorana ary fahatsoran'ny vahoaka rosiana. Noho izany ...
Voznesenskaya Julia Nikolaevna: biography, miasa
Tsy mora ny lalan'ny fiainana an'ity vehivavy miavaka ity - poeta, mpanoratra ary misiônera. Ho fanampin'ny hetsika mahazatra, ny bokin'ny fiainan'i Yulia Voznesenskaya koa dia mirakitra pejy sarotra toy ny toby sy fonja, fieken-keloka ...
A. Pushkin "Gypsies": famakafakana ny tononkalo
Tamin'ny asany voalohany, Alexander Sergeevich dia matetika mandika ny eritreritr'i Byron sy Russo. Ireto mpanoratra ireto dia sampy ho an'ny poeta Rosiana lehibe, saingy nandalo ny vanim-potoanan'ny fitiavan-tena, ary nisy eritreritra vaovao niseho ...
"Murzuk" Bianki - famintinana ny tantara
Izy no nanoratra ny tantara "Murzuk" nataon'i Bianki. Ny famintinana dia hampahafantatra ny mpamaky amin'ity sanganasa mahaliana ity. Ny tantara dia manomboka amin'ny sehatra iray any anaty ala. The Hunter Ny mpanoratra dia mampahafantatra ny mpamaky ny iray amin'ireo mpilalao malaza - Andreevich antitra. ...
Yesenin, "Alikan'i Katchalov": iza no nanokanana ny zavaboary? Isika dia manambara ny tsiambaratelon'ny taonjato
Ilay poeta Rosiana lehibe ary ankafizin'ny vehivavy, Sergei Yesenin, dia teraka tamin'ny 1895, tamin'ny 21 septambra, fomba taloha. Inona no nahasarika azy indrindra ny lahy sy ny vavy? Voalohany, mazava ho azy, fisehoana tsy hay tohaina. ...
James Aldridge, The Last Inch. Famintinana ny tantara
Nanoratra ny The Last Inch tamin'ny fombany mampiavaka azy i J. Aldridge. Nino ny mpanoratra fa ny zava-dehibe indrindra amin'ny mpamorona ny sanganasa dia ny famoahana ny fomba niforonan'ny olona iray, mba hahatratrarana ny fotoana hivadihan'ny zaza ho tovovavy ...
pejy 1 pejy 2 ... pejy 104 Next Page
56 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 1,486.